Shina: Miteraka Tsikera Ilay Areti-Mifindra EV71. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2018 5:13 GMT
Na tsy misy ifandraisany amin'ny gripan'ny vorona aza, ny fiparitahan'ny HFMD (Hand Foot and Mouth Disease – fièvre aphteuse) vao haingana ao Shina dia manome tombony antsika hijery ny fomba famalian'ny governemanta Shinoa manoloana ny valanaretina iray. Nandritra ny faran'ny herinandro, nandefa fanairana nasionaly i Shina mba hifehezana ilay aretina satria niparitaka tany amin'ny faritra maro hafa ao Shina koa izy io. Na izany aza, tsy nisy afaka mahita ny fiafaran'io fanaintainana io isika izay mitombo isanandro vaky. Zarain'i Chenguang [zh], bilaogera, ny heviny amin’ny alalan’ny fanoharana azy io amin’ny valanaretina SARS tamin'ny taona 2003.
Talohan'ny 23 aprily, nanahy sy natahotra ireo manam-pahaizana momba ny ady amin'ny aretina tany amin'ny faritanin'i Anhui noho ny fanamafisana ny antony nahatonga ilay aretina. Saingy taty aoriana izy ireo dia nahita ny fototra voalohany niavian'ity tranga ara-pahasalamana manjo ny daholobe ity, ny viriosy EV71 efa 40 taona lasa izay, ary io viriosy io no niteraka ny “aretim-borona” tany amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Tamin'ny taona lasa, tany Shandong, faritanin'i Anhui mpifanolo-bodirindrina, dia efa nahatratra 10.000 teo ho eo ny tranganà aretina voalaza, nisy fahafatesana vitsivitsy.
Rehefa tonga any amin'ny Biraom-paritry ny Fahasalamana ao Anhui ny tompon'andraikitra avy any ivelany, nangataka ny “tatitra ara-potoana mety momba ny aretina ho an'ny minisiteran'ny fahasalamana”, ilay fialantsiny nanaitra hoe “ny aretin'ny tsinay EV71 dia tsy aretina mila anaovana tatitra” no namindra tanteraka ny fientenentanana ho any amin'ny hafa. Tamin'izany fotoana izany, any anaty vaovao, mihoatra ny 10 ireo zazakely maty tany Fuyang.
Taorian'ilay loza dia mihoatra ny iray ireo tompon’andarikitra nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao fa: “Misy 20 000 ka hatramin'ny 30.000 ny tranganà valanaretina hita isan’andro ao Shina ary tranga mihoatra ny 6 tapitrisa no voatatitra isan-taona. Raha mitranga amintsika ny iray amin’izy ireny, tsy hiteraka fikorontanana ara-tsosialy ve izany ?
Ny fiheverana ideolojika, fa ny fampiharana nilaozan’ny toetrandro. Ao amin'ny kolontsaina mitondra an'i Shina, ny fiarovana no tena mampiasa loha mafy tokoa ny manampahefana. Raha tsy izany, dia mety hiala amin’ny toerana ofisialy misy azy izy ireo. Ireo mpiasam-panjakana ambony matetika dia hampiasa “ny firenena sy ny vahoaka” hampianatra ireo mpiasam-panjakana mbola amin’ny dingana ambany. Na izany aza dia hanome lanja fotsiny ireo mptantana ny “tranga fiarovana ara-tsosialy ” izany, ary tsy hiraharaha ny “fahasalamam-bahoaka” / “loza voajanahary”. “Hialàna” ny andraikitra, ao anatin'ny fotoan-tsarotra, dia toa ny manafina, fa tsy ny manao tatitra na na “mandefa tatitra miakatra” fotsiny no ataon-dry zareo. Ankoatry ny tsy fisian’ny rafitra sy ny fomba mahomby handraisana an-tànana ireo olan'ny vonjy taitra, ny governemanta ao an-toerana koa dia tsy manana teknolojia fanairana mialoha sy fitaovana ara-teknika mba hakàna ny fahaiza-mitantana. Efa hitan’ny sampan-draharahan'ny momba ny toetrandro nialoha ilay orampanàla be dia be tany atsimo tamin'ny fiandohan'ity taona ity saingy tsy misy ny fiomanana ao anatin'ity ampahany ny fitantanana ny vonjy taitra ity.
Lazain'ny blaogera Lelelele [zh] fa betsaka ny fanahiana izay mety hipongatra avy amin'ireo olan'ny fifindran'ny EV71 amin'ny daholobe.
Ny 29 Aprily, nambaran'ny Biraom-paritry ny Fahasalamana ao Anhui fa 10 tapitrisa RMB no nampiasaina hividianana fitaovana fitsaboana. Saingy hatramin'ny 2 May, ny ankamaroan'ny fianakavian'ireo niharam-boina dia tsy nahalala io fitsipika io ary tsy nahazo tombony na kely aza tamin'ilay politika, ary mbola miaritra ny halafon’ny vidin’ny fanafody. Raha oharina amin'ny fitsipahana ny tsaho izay, amin'ny lafiny iray, miankina amin'ny feon'ny fieritreretana, mihoatra lavitra noho izany ny “fanjavonan” ny fanapariahana ara-bola. Tena tsy azo eritreretina!
Heverin'ilay blaogera Anglisy, FLA_MEDIC fa tsy tomombana ny rafitra ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana ao Shina.
Tamin'ny taona 2003, nafenin'i Shina ny zavamisy hoe nahita tranga an-jatony tamin'ilay karazana vaovao tamin'ny aretin-tratra mahafaty ry zareo, izay lasa fantatra amin'ny hoe SARS, nandritra ny volana maromaro izay. Taloha, tsy mailaka kokoa ry zareo namboraka momban’ny gripam-borona, ary nihisatra tamin'ny fandefasana ampahany hotiliana tany amin’ny OMS.
Miteny mihitsy aza ilay blaogera Yin Minhong fa tokony hametra-pialana ny Praiminisitra Wen Jiabao raha tsy vitan'ny governemanta ny mifehy ny fihanaky ny aretina .
Tafakatra ho 11.905 ny trangan'ny aretin'ny fièvre aphteuse (HFMD) tany Shina tamin'ity taona ity, tamin'ny alatsinainy 5 May 2008, ka nahafaty olona 26, araka ny filazan'i Xinhua an'ireo tarehimarika ofisialy. Tang Xiaoping, manampahaizana manokana momba ny areti-mifindra no sady tale lefitry ny biraon'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana ao Guangzhou dia nilaza fa vokatry ny baikon'ny Minisitry ny Fahasalamana tamin'ny zoma ilay fitomboany haingana, baiko izay manasokajy ny HFMD ho anisan’ny areti-mifindra sokajy C tsy maintsy anaovana tatitra any amin’ny ministera.
Mpanoratra iray tsy mitonona anarana no namoaka teny vitsivitsy milaza fa ny fiparitahan'ny EV71 dia maneho olana sosialy anatiny sy goavana kokoa ao Shina.
Mety hanampy ny fametrahana ity valan'aretina ity ao anatin'ny vanimpotoana nisiany ary hijery ny tantaran'ireo fiparitahana fahiny ary koa ny fepetra fara-pahasalaman'ny ankizy ao amin'io ampahany amin'i Shina io. Noho ny antony maro smihfa, mety ho atahorana kokoa ve ireo ankizy ireo? Mora tratran’ny otrikaretina hafa ve izy ireo? Toy ny ahoana ny fiahiana ara-pahasalamana, fahantrana, toekarena any amin'io ampahany ao Shina io. Toa tena faran'izay voaloto ny rivotra any.